Raw Oxiracetam powder (62613-82-5) Vaiti - Phcoker Chemical
Raw Oxiracetam powder yakadzidzwa sechinhu chinogona kurapa kurasikirwa kwechirangaridzo chinokonzerwa nechirwere cheAlzheimer uye zvimwe zveurorological ..........
Raw Oxiracetam powder (62613-82-5) video
Raw Oxiracetam powder (62613-82-5) Specifications
Product Name Raw Oxiracetam powder
Kemikari Name 2- (4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide
Brand Name Kwete dheinhare iripo
Kirasi yeMishonga Nootropics Zvinodhaka
Molecular Wsere 158.15
Kunyorera Point 165-168 ° C
Boiling Point 494.6 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life 8 maawa
ruvara White Solid
APane Nootropic. Analog yePiracetam ine psychostimulant basa.
Raw Oxiracetam powder (62613-82-5) Tsanangudzo
Raw Ociracetam powder is derived from Piracetam uye inoita kuti chirwere chinonzi metabolism chinowedzera, chinowedzera zvikuru uye chinokurudzira kuchengeta chiyeuchidzo, uye chinonyatsobata chiyeuchidzo chinokanganisa uye kupera kwepfungwa. Inoshandiswa kurapa uropi hutachiona hwechirwere chepfungwa uye zvinetso zvepfungwa. Inogona kuvandudza chiyeuchidzo uye kudzidzira mano evarwere vane hutano hwekuora mwoyo kana kushushikana kwepfungwa. Inokodzera kurapa neural disperction, kukanganwa kwepfungwa uye kushungurudzika kwepfungwa kunokonzerwa nekukuvara kweuropi. Inogonawo kushandiswa sekurapa kurapa kweeurosis, brain trauma, encephalitis, nezvimwe zvirwere zvepfungwa. Nzira yakakura yeOxiracetam powder ndeyekuti yakanyanyisa mumvura, zvichiita kuti iwane yakakosha. Kutsvakurudza kunoratidza kuti Raw Oxiracetam powder ine basa rakakura rezvokurapa uye zvinokonzera kukanganisa kuenzaniswa nePiracetam.
Oxiracetam powder (62613-82-5) Mitiro weAtambo
Oxiracetam yakachengetedzwa zvakasimba ne scopolamine-induced amnesia yose mumatare evanhu uye kuvanhu, vachiratidza kuti inogona kubatsira kupora kubva kune zvinodhaka kudhakwa uye zvimwe zvinokonzera kusagadzikana zvinyorwa nekuchengetedza mazinga akakwana eacetylcholine sechinangwa chekutanga.
Oxiracetam yakaratidzwa kuwedzera acetylcholine kusunungurwa mukati memagetsi emukoko. Sezvo acetycholine inobatanidzwa mukushanda kwekurangarira kwechirangaridzo, izvi zvinogona kutora nharo dzayo yeootropic.
Kuisa pfungwa uye Kuisa pfungwa
Kuvandudzwa Kwezwi Kunzwisisa
Unyoro Hwakasimba uye Unokurudzira Kuka
varumbidzwa Oxiracetam powder (62613-82-5) Dosage
Nhamba ye oxiracetam yakaderera kupfuura yepiracetam, asi izvozvo hazvirevi kuti zvishoma zvingakwana. Chimiro chetachiona chiri pakati pehuwandu hwe1200 mg uye 2400 mg inotora nguva yezuva, kana mumatatu kusvika matatu katatu akapararira dosing nguva (zvakadai sematatu matatu e400mg kana 800mg).
Zvikanganiso of Oxiracetam powder (62613-82-5)
Oxiracetam inogona kukonzera misoro. Kuti ubvise hutachiona hwemakumbo, tora choline supplement se alpha GPC kana citicoline.
Nemhaka yokuti ine zvinyoro zvishoma zvinokurudzira, oxiracetam inogona kukanganisa kurara kwemazuva ose kana ikatorwa munguva yakareba masikati.
Migumisiro yekusuruvara nekutya, asi zvisingawanzoitiki, dzimwe nguva zvataurwa. Izvi zvinowanzogadziriswa nekutora oxiracetam pakutanga kwezuva kana kuderedza kuyerwa.